Qaramada Midoobay Oo ka Hor-timid Cunaqabataynta Maraykanka Uu kusoo Rogay Iran. – Heemaal News Network
Qaramada Midoobay Oo ka Hor-timid Cunaqabataynta Maraykanka Uu kusoo Rogay Iran.
Xoghayaha Guud ee QM Antonio Guterres ayaa sheegay in Qaramada Midoobay aysan taageeri doonin cunaqabateyn lagu soo rogo Iran oo uu Mareykanku dalbanayo illaa buu yiri uu ogolaansho arrintaasi ah ka helo Golaha Ammaanka ee QM.
Madaxa QM ayaa ku sheegay warqad uu u diray madaxweynaha golaha oo Axadii ay heshay wakaaladda wararka ee AP in ay muuqato hubanti la’aan ku saabsan in Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo uu kiciyay hanaanka dib u soo celinta cunnaqabateynta ee ku saabsan qaraarka Golaha Amniga ee dhigaya heshiiskii Nukliyeerka ee 2015 dhexmaray Iran iyo lix quwadood oo waaweyn.
Wuxuu sheegay in xoghayaha guud uusan go’aan ka qaadan karin hubanti la’aanta jirta awgeed uuna u baahan yahay cadeyn ka timaadda golaha ammaanka.
Dhinaca kale, Sarkaal ka tirsan dowladda Mareyka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Rueters in dowladda Mareykanka ay maanta oo Isniin ah cunaqabateyn kusoo rogi doonto in ka badan 20 qof iyo hey’ado ku lug leh niyukleerka, gantaallada iyo barnaamijyada hubka caadiga ah ee dalka Iran.
Sarkaalan oo qariyay magaciisa, ayaa sheegay in Iran ay heysato qalab ku filan oo ay ku diyaarin karto hub niyukleer ah dhamaadka sannadkaan, isla markaana ay Iran billowday tijaabinta gantaallada riddada dheer iyada oo iskaashi la sameyneyso dalka Kuuriyada Waqooyi.
Ma uu san bixin wax faah-faahin ah oo tusinaya caddeyn ku saabsan xogta hubka niyukleerka Iran.
Cunaqabateynta cusub ee la filayo in mamaulka Trump uu maanta saaro shakhsiyaad iyo hey’ado ku lug leh hubka Iran, ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan uu madaxweyne Trump dhex-dhexaadiyay heshiis ay xiriir diblamaasi ku sameysteen dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Israel.
Madaxweynaha Puntland Oo kulan Yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Shiinaha Oo ku Dhaqaaqay Qorshe Cabsi ku Abuuray Shacbka Taiwan.